बैनी संगको सुहागरात !!!
loganko vinaju 68 days ago
More by loganko vinaju
Sandeep lamichhane introduced his girlfriend
लगाउ कि नलगाऊ ?
पोर्न हैन टिक-टक खतरनाक नेपालआ
google मा साझा ...
ग्रीन कार्ड कस्तो हुन्छ ?
Future potential Green card holder looking foragirl .
कृष्ण नै अन्तिम सत्य
नर्थ डकोटा ( ND ) बस्न लाई कस्तो हुन्छ ?
गजल र दोहारीको उत्क्रिसठ फ्युजन
कोरनाले मर्नु अघि कमन सिंह लामाको पत्र
FB बाट login भाको छैन साझा ....
नारायणकाजी र बिनाको जोडी कस्तो लाग्छ ?
स्वास्नी त कमरेड ! अर्कैकी ठीक !!
नमिता-सुनिता हत्या संधर्बमा
स्टिमुलस चेक आउने भयो
Visitor is reading बैनी संगको सुहागरात !!!
Visitor is reading where can i listen online nepali radio??
Visitor from US is reading दशैं विशेष - चौतारी
Visitor from DE is reading जल्नेहरु यसरी जले.................
Visitor is reading Event: BANA ANNUAL PICNIC 09'
Visitor from GB is reading Do u believe this?
Visitor from DE is reading प्रियंका कार्की जी, के हजुरले ए.एन.ए मा उहालाइ देख्नु भो ?
Visitor from DE is reading Must watch video: World cup and Nepal
Visitor is reading sexually active
Please log in to subscribe to loganko vinaju's postings.
[VIEWED 1560 TIMES]
Posted on 12-18-20 10:17 AM Reply [Subscribe]
आफ्नै बैनी होइनन, मामाकि छोरि पनि हैनन् , उनलाई online मा भेटेको । confession of Nepalese teenagers भन्ने FB पेज छ त्यहाँ teenager हरुले आफ्नो समस्या राक्छान । २०१७ अन्तिमताका एउटा केटोले career choice सम्बन्धि प्रस्न राख्यो , मैले जानेको counseling कमेन्ट मार्फत गर्दिए । मुजी खासै केहि लेखेको थिएन तर मेरो कमेन्टमा ३० ओटा भन्दा बढी likes आयो । inbox को other folder मा एउटा message पनी आयो, मुजी केटीको थियो , केटि नि के भनौ १९ बर्सकी फुच्चीको ।
पहिला त account verify गरे, सक्कली थियो । मेरो नक्कली FB मा सक्कली केटिको message आयो । मैले गरेको counseling ओरि- परि रहेर केहि कुरा सोधिएको थियो , स्वोभाबिक लाग्यो सकेको जानकारी दिए । तेस्को २ ४ दिन त्यो BF खोलिन, जब खोले फेरी तेइ फुच्चीको message थियो । कुरो तेही , career को , +२ पछि के गर्ने, कसो गर्ने कहाँ पढ्ने येस्तै येस्तै । कुरो गर्न त झ्याउ लाग्न थाल्यो अब तैपनि प्रस्न सोधी रही जानेको उत्तर दिई रहे " बहिनि " सम्बोधन गरेर ।
जाठीले friend request पठाई, अब आफ्नो account नक्कली, भित्र केहि छैन , २ नम्बरी चुतिया काम गर्न मात्र बनाको FB account । २ ३ दिन accept गरिन , तेस्पछि के सुर चल्यो आफ्नो original ID को लिंक पठाए अनि त्यहाँ request पठाउन भने ,पठाई अनि साथी बन्योउ।
फुच्ची अल्गी सिलित्त परेकी थिई , तेतिबेला टिक -टकको आमा musically भन्ने खुब चलेको थियो । जाठीले video बनार हल्दी रैछे , खुबै राम्रो लाग्ने । FB भरि राम्रा राम्रा फोटा, व्यक्तिगत विवरण , खाएको, हिडेको सबै सूचना थिए । बास्तबमै निस्कपट, निस्कलंक , चंचल अनि पारदर्शी तेस्को स्वोभाब थियो । तेक्सो Face book संग आफ्नो तुलना गरे मुजी आकास जमिन को फरक । मेरोमा मुस्किलले ५ ओटा तस्बिर थियो , काम , बसाई , पढाई , relationship status सबै hidden । हुन पनि ५ जना केटि संग कुरा गर्न ५ ओटा खाता थिए मेरा ।
फुच्ची संग कुराहरु अलि व्यक्तिगत हुन थाले , काम बसाई , पढाई , घरपरिवार आदि आदि सब । त्यो संग ढाट्नु पर्ने केहि थिएन , तेस्लाई मैले बैनी भनेको थिए , उमेर मुजी ७ वर्ष भन्दा बढीको फरक त्यो १९, म २६/२७ , केहि हुने सम्भावना थिएन, फेरी म तात्कालिक अवस्थामा committed relationship मा थिए । अक्कल झुक्कलमा committed relationship मा हुन्छु र भाको बेला राजा रामचन्द्र जस्तो त बन्दिन तर कृष्ण जस्तो बोका नि बन्दिन ।
जाठीको boyfriend थिएन म नि एक्लै बस्थे , video मा कुराकानी हुन्थियो कहिले कहिँ । तेस्को नराम्रो बानी , messenger मा hy लेख्ने अनि रेस्पोन्स गरेन भने २ ४ second पछि सिदै video call हानी हाल्ने । अब मुजी तेस्ले नेपाल बाट cal गर्दा मेरो कित राती कि त एका बिहान हुने । म मुजी जहिले ओछ्यानमा लम्पसार हुन्थे , अब ओछ्यानमा भाको बेला तल boxer बाहेक म केहि लाऊदिन । तेस्ले cal गरि कि मुजी पहिले लुगा कता छ भनेर खोज्नु पर्ने । पछि पछि त मुजी कुरा गर्दा माथि नांगै हुन्थे । " फोन गर्यो कि जैले नांगै हुनु हुन्छ के हो पारा? " भनेर सोधी एकदिन , " जाठी फोन गर्नु भन्दा पैले text गरेर hi हेल्लो , can i cal ? , भनेर सोध्न सक्दैनस ?" भनेर गाली गर्न मन थियो तर बच्चा हो भनेर येतिकै हासेर उडाई दिए । खै मुजी कुरा नि केहि गतिलो हुन्थेन, गर्नु पर्ने कुरा नि केहि थिएन तैपनि १ २ दिन बिरार video cal गर्थी । ठिकै लाग्थियो त्यो संग कुरा गर्न तर मुजी कुरा चै के गर्ने भन्ने हुन्थियो । न त्यो मेरो आफ्नै बैनी , न उमेर मिल्ने साथी न मेहेबुबा, career का कुरा धेरै आघि रित्ति सकेका थिए ।
एक दिन video cal गर्ने बेला तेस्ले मेरो देख्नु नहुने कुरा देखिचे , हेर्नुस मुजी एक्लो ज्यान ,कोठा भित्र पस्योकि म सके सम्म कम कपडा लाउछु , त्यो दिन नि underwear त लाको थिए तर राम्ररी लगाएको रैना रैछु । underwear malfunction भाको रैछ । मेरो छाती त तेस्लो जैले देख्ति तेस्मा उसलाई कुनै समस्या थिएन तर त्यो दिन अलि बढी भाको रैछ । मैले जानेर गरेको हॊइन तर video cal सकेको केहि समय पछि तेस्ले text गरि messenger मा । तेस्को message ले मलाई स्तब्द बनायो ........
Posted on 12-18-20 11:33 AM [Snapshot: 138] Reply [Subscribe]
हैन मुजी bendick ज्यु ,
तपाईलाई मैले खाको, लाको, उठेको , बस्नेको सुइ लगाको आदि सबै कुराले किन पोल्छ होउ भत् भति ? हिजो नि सुइ लगार आराम गरेर बसेको बेला अनाब- सनाब बोल्नु भयेछ , ससुरा बा ले मलाई भन्दै होइसिन्थियो । अनि मुजी तपाई र मेरो टसनमा सालो लाई किन बीचमा तान्नुहुन्छ? सालो आफै समलिंगी यौन काण्डमा फसेर " मु कालो " गरेर कुना पसी राखेको छ , तेस्ले तपाई लाई के प्रस्टीकरण देला ?
फेरी मुजी यो साझाआ विभिन्न अनैतिक सम्बन्ध, समलंगी काण्ड लगायत विसंगति छन् त, त्यहाँ त तपाई चुइक्क बोल्नु हुन्न , मुजी अनि मैले कविता लेखे नि तपाई को टाउको दुख्ने, इतिहास लेखे नि migraine हुने अनि मैले गर्नु चै के पर्यो ? लु भंदिनुस , म प्रति तपाई किन तेती पुर्बग्राही ?
Posted on 12-18-20 12:05 PM [Snapshot: 180] Reply [Subscribe]
हजुर नमस्कार लोगनको भिनाजु,
अब लोगनजी "समलिङी काण्ड"मा परेको भनेर उँहाले केही पनि बोल्नु भएन, झन आगोमा मट्टितेल खनाको जस्तो भो। उहाँले नासजीको अन्तरङ फोटो किन सेभ गर्नुभाको हो, अनी किन त्यस्तो लेखेको हो? अब मैले कसरी जानुम हजुर? तेही पनि उहाँलाई तेस्तै कुरामा इन्ट्रेश्ट होला नि त हजुर। It'safree world अब हामीले के भन्ने? बाचौ र बाँच्न दिउ होला हजुर।
साझामा अनैतीक सम्बन्ध र समलिङी काण्ड र बिसङितीहरु छन हो। Choose your battle भने जस्तै होला अब। मेरो battle चै त्यहाँ शुरु हुन्छ जहाँ "स्वास्नी त कमरेड अर्कैको ठीक" या "बैनी सँग सुहागरात" जस्ता "शक भ्याल्यु" टाइटल भाका लेखहरु मैले पढ्छु। नपढिदा नि हुन्थ्यो, तर के गर्नु आँखा लोभि मन पापी, कुरा तेही हो। You look for attention I give you my attention सो यसमा मेरो पूर्वाग्रह भन्दा नि घोच्-पेच गरेको मान्नुहोला हजुर।
Posted on 12-18-20 12:30 PM [Snapshot: 260] Reply [Subscribe]
फोटो save गरे पछि बरु कि मै भिनाजुको पोटिलो ढुक्कुरको save गर्नु , मुजी नासे जस्ता गाजा खादा खादा सुकेका दाउरे हरुको १ इन्चे ढुकुरमा के तृप्तिलिनु भन्ने मेरो प्रस्न नि सुनाई दिनु होला ।तपाईका हिजोका १ २ ओटा प्रस्न को उत्तर दिदै गरौला , सुइको दुखाई बाट तन्ग्रे पछि , ऐय्या